တူမောင်ညို – ပြည်သူလူထုက တာဝန်ကျေပါတယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုသန်းလွင် - သီအိုစီဒိုက် ထောင်ချောက်
တူမောင်ညို – ပြည်သူလူထုက တာဝန်ကျေပါတယ်
ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၄
“စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ” ကို အခုရော၊ နောင်ရော တစိုက်မတ်မတ် ဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကို အလေးထားပါတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးနောက်ပိုင်း (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းခြင်း၊ သတ် ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတဲ့ ဒီချုပ်ပါတီဝင်များအပေါ်လည်းစာနာလေးစားပါတယ်။ ဒီချုပ်ပါတီဝင်များက ဒီချုပ်ပါတီကို “တစ်သက်မှာ နှစ်ဘဝ” ပါ လို့ မချင့်မရဲ ပြောဆိုသံကိုလည်း ကြားပါတယ်။
ဒီချုပ်ပါတီဟာ “တစ်သက် နှစ်ဘဝ” အတွင်းမှာ သဝေထိုးသွားတဲ့ အကြိမ် ၄ ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အာဇာနည်နေ့ချီတက်ရေးကိစ္စ
ဂန္ဒီခမ်းမဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပစ်ပယ်ကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားညီလာခံ( ကျိုက္ကဆံ) တက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် (နဝတ) စစ်အစိုးရရဲ့ (၁/၉၀ ကိုလက်မှတ်ထိုးကြခြင်း)
(အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံ/ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး) “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်” ကိုပစ်ပယ်ကာ “အရှိကို အရှိ တိုင်း အသိအမှတ်ပြုတယ်” လို့ဆိုကာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း/ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်း
“ဇယား ၄ ကတိသစ္စာပြုချက်ပြင်ဆင်ပေးရန်” တောင်းဆိုခဲ့ပြီး “ဇယား ၄ ” ပါ စကားလုံး အတိုင်း ကတိသစ္စာပြုမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ၂ မေ ၂၀၁၂ တွင် လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်သွားခြင်း
အခုဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောလာသကဲ့သို့ပင် (ဗိုလ်)ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရဟာ အောက်တန်း အကျဆုံးနည်းတွေ မီးကုန်ယမ်းကုန်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်လာနေပါတယ်။ မကြာခင်က မန္တလေးမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ် ဒီချုပ်ပါတီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်ကိုပင် “အတု”လုပ်ပြီးဖြန့်တဲ့ အထိ ဇက်ရဲလက်ရဲလုပ်လာကြပါတယ်။
“ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး” နဲ့ပတ်သက်ရင် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရကလည်းပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိ၊ စစ်တပ်ကလည်းမပြင်ချင်ဘူးဆိုတာ ဒီချုပ် ပါတီ ကောင်းကောင်းသိနေပါတယ်။ “ဖြောင့်မတ်သော” နာယကကြီးမှာရော ဘယ်လိုဆန္ဒရှိသလဲ။
အမတ်တစ်ယောက် လစာ ၃ သိန်းသာရနေချိန် အမတ်ချုပ်လစာ ၃၅ သိန်းရနေလို့ မလုံမခြုံခံစားရတယ်လို့ (မဲဆွယ် အပြော လေးနဲ့) နတ်သံနှောနေတဲ့ အမတ်ချုပ် ဗိုလ်ရွှေမန်းက ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိစ္စကိုတော့ ဘာခံစားချက်မှ မရှိဘဲပြောထွက်လာပြီ။
ဗိုလ်အောင်သောင်း၊ ဗိုလ်ဌေးဦး တို့ခြံရံထားတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အမတ်ချုပ်ဗိုလ်ရွှေမန်းက ဒီချုပ်ပါတီက လုပ်နေတဲ့ ပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ “၃၁ ဦးကော်မတီ” အပေါ် “သိပ်ပြီးသြဇာသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး”လို့ ပြောနေပြီ။ ဒီပြောဆိုချက်က ဒီချုပ် ပါတီအနေနဲ့ လက်မှတ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲရရ အရေးမစိုက်ဘူးလို့ပြောတာပါ။
ဒီစကားကို ဗိုလ်အောင်သောင်းနဲ့ဗိုလ်ဌေးဦးတို့ ဝဲယာခြံရံပြီးမှ ပြောတာမို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့သဘောထားလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကြံ့ဖွံ့အမတ်တွေနဲ့ ကာချုပ်အမတ်တွေ စီးနင်းထားတဲ့ လွှတ်တော်ဟာ ဘယ်လိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် “ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ” လို့ ပြည်သူတွေက ဒီချုပ်ပါတီကို မေးနေကြတာပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူတွေမှာ “တာဝန်ရှိတယ်” လို့ပြောပြီး ပြန်အဖြေပေးနေပါတယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း တာဝန်သိတဲ့ ပြည်သူတွေဘက်က တာဝန်ကျေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီချုပ်ပါတီကို မဲတွေပုံအောပေး ခဲ့ကြပါတယ်။ “ဂန္ဒီခမ်းမလှုပ်ရှားမှု” ဆိုတော့လည်း ပြည်သူတွေပဲ အားတက်သရော ဝန်းရံခဲ့ကြတာပါ။ (စီအာပီပီ) ဆိုပြန်တော့လည်း ပြည်သူတွေဟာ ဗေဒါပျံအံကိုခဲဆိုတာလို ရင်စီး၊ခါးစီးပြီး အားပေးခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့သလဲ။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေဟာ အားတက်သရော ဒီချုပ်ပါတီကို မဲတွေပုံအောပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ အခုလည်း ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးမှာ ပြည်သူတွေဟာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးနေကြပါတယ်။ ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှာ ထုတ်ပြန် တဲ့ ဒီချုပ်ကြေညာချက်အရ (၃၃ သိန်း) ရနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေဘက်ကပြောရင် ဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ကျေပါတယ်။ ပြည်သူတွေဘက် တာဝန်ပျက်ကွက်တာ မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ပြည်သူတွေဟာ တရားရှိနဲ့တရားမဲ့သူ၊ ဖိနှိပ်အုပ်စိုးသူနဲ့ အဖိနှိပ်ခံတွေဘက်ကရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သူကို ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ် ခွဲခြား သိမြင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာတွေ၊ တရားဥပဒေတွေစိုးမိုးတာတွေမစိုးမိုးတာတွေ၊ အခြေခံဥပဒေဘာညာတွေ၊ နိုင်ငံရေး သဘောတရားဘာညာဟောတတ်ပြောတတ်ချင်မှပြောတတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ အမှန်နဲ့အမှား၊ အတုနဲ့အစစ်၊ တရားတာနဲ့မတရားတာတော့ ကောင်းကောင်း ခွဲခြားသိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုမှာ တာဝန်ရှိသလို၊ ပြည်သူလူထုကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း မှန်ကန်တဲ့ဦးတည်ချက်ကို ချီတက်နိုင်ဖို့ ဦးဆောင်လမ်းပြရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်။ မှန်ကန်ပြတ်သားတဲ့ ဦးဆောင်မှုရှိမှသာ သိသာထင်ရှား တဲ့ ရလဒ်ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောနေဆိုနေတာတွေချုပ်ကြည့်လိုက်ရင် စိမ်ခေါ်ခြင်းတစ်ဝက်၊ ဖြောင့်ဖျနားချခြင်း တစ်ဝက်နဲ့သူ့ဘက် ကနေ အလျော့အတင်းအပေးအယူတွေ ကမ်းလှမ်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ်မယ်။
သာဓကပြရရင်ဖြင့် စစ်သားအမတ် ၂၅% နဲ့ပတ်သက်ပြီး “ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ပြည်သူလူထုကရွေး ချယ်တင်မြှောက်ထား ခြင်း မရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေပါရင်ပါ ပါစေ၊ဒါပေမဲ့ အဓိကကျတဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ မဲပေးပိုင်ခွင့်တော့ မရှိစေသင့်ဘူး” တဲ့။
ဒီချုပ်ကပြင်ဆင်လိုတဲ့ “ပုဒ်မ ၁၆၈ခု” (၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပေါ်လေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုချက်စာတမ်း) ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၆ (ဃ) “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော”ဆိုတဲ့ စာသားကိုဖြတ်ပယ်ရန်နဲ့ ပုဒ်မ ၆(စ) “နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်း ကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းနိုင်ရေးတို့ကိုအစဉ်တစ်စိုက်ဦးတည်သည်”ဆိုတဲ့ ကို စာပိုဒ်များ၊ ပုဒ်မများ ကို ဖြုတ်ပယ်ရမယ်လို့ဆို ထားသော်လည်း ပုဒ်မ ၁၄ “ကာချုပ်ခန့်စစ်သားအမတ်များကိစ္စ”ကိုမူ “ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်” ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြချက်ပေးကာ “အထွေထွေသဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြင်ဆင်သွားရန်” အဆိုပြုထားပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတစ်ဖက်မှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို စိမ်ခေါ်သလို အလေးတင်းပြောနေပေမယ့်လည်း အခြားတစ်ဖက် မှာ “အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကို ဘယ်တော့မှ မျက်ခြည်မပြတ်ပါဘူး ”ဆိုတဲ့ လေပြေထိုးမှု ကလေးတွေနဲ့ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဖက်က (ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဘက်က) စိမ်းကားလှပါ တယ်။ ဘာမှမတုန့်ပြန်ပါဘူး။
ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်း၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကို တွေကိုမသိလို့မဟုတ်ပါဘူး၊သိပ်သိပါတယ်။ “စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ”ဆိုတာစစ်အုပ်စုက သူတို့ပေးချင်သလောက်သာ အကန့် အသတ်နဲ့ပေးသနားထားတဲ့“ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး”မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ“၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ” ရဲ့ အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံရေးအရ အကန့်အသတ်နဲ့သာနေရာပေးချင်တာပါ။ အာဏာခွဲဝေပေးဖို့ သူတို့မှာ သဘောထားမရှိပါဘူး။ အနောက်အုပ်စုနဲ့သူတို့အကြားက ၁၉၈၈ ကတည်းကစိမ်းကားဝေးကွာသွားကြတာကိုပြန်လည်နီးစပ်ရေးအတွက် ၂ ဖက်စလုံးက ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသုံးချခဲ့ကြတာ၊ အသုံးချနေကြတာသာဖြစ်ပါတယ်။
ကာချုပ်ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်က ထိုင်းကာချုပ်နဲ့တွေ့စဉ်ပြောတဲ့စကားက ရှင်းနေတာပါပဲ။ “ဒီမိုကရေစီသည် စည်းနှင့် ကမ်းနှင့် သွားရသည်ဆိုသည့် အမြင်ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း”ပြောနေတယ်မဟုတ်ပါလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေ”ကို လွှတ်တော်တွင်းကနေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ ဒီချုပ်ပါတီရဲ့ “စမ်းသပ်ချက်” ဟာ လုံးဝ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့သင်ခန်းစာရရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။
2 Responses to တူမောင်ညို – ပြည်သူလူထုက တာဝန်ကျေပါတယ်
Kill_the_Devil on July 19, 2014 at 4:51 pm
When you are dealing with THUGS,THIEVES & CROOKS (than shwe & his party),
if you against them , THUGS will find the ways to whack you and suppress you.They are always ready to take back the state power under military control for next 30 years.
If you talk about transparency , THIEVES feel uncomfortable and they will find the ways to block you.They don’t let you see what they have stolen our assets & belongings.
if you talk about “for the people,by the people ” , CROOKS will behave like gentle men and will behave like people representatives and concurrently they will find the ways to trick you & cheat you.
We ,all know they are above the LAW. Those THUGS,THIEVES & CROOKS are protected by Army ,Police ,Swan Arr shinn (THUGS) and Nargis constitution.They will never come to fair ground because they know their Crimes & sins they have committed.
So ,tell me Tuu Maung Nyo , if you are part of the NLD ,What will you do? What’s your strategies to deal with THUGS,THIEVES & CROOKS.? How do you want to play your opposition role under Nargis constitution?
Again , so tell me Tuu Maung Nyo , if you are part of the THUGS,THIEVES & CROOKS ‘s party ,What will you do?
Win Hlaing on July 19, 2014 at 7:49 pm
ဆရာတူမောင်ညိုရဲ့ ဆောင်းပါးက ဖတ်လို့ကောင်းပေမယ့် စစ်အစိုးရအကြိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (NLD)တို့ကို တဖက်လှည့်နဲ့ ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာတူမောင်ညိုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုအားမရဘူးတာပြောနေတာ ဗိုလ်ရဲထွဋ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့စစ်တပ်ကို ပြောတဲ့အခါမှာ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ ပြောဆိုဖို့ပါပြောသွားပါတယ်။ ယခုလက်ရှိဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းဟာ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတခုလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အစစအရာရာအဆင်မပြေတမ်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုချည်းအပြစ်ပုံလို့မရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD လုပ်ဆောင်နေကြတာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတူမောင်ညိုအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရဖက်က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမူကို လှစ်လျုရှုနေပြီဆိုရင် ၊ ပြည်သူအတွက်ကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ကျနော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပြည်သူ့ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဝန်းရံရပ်တည်ပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ လွှတ်တော်ကနေ ၄၃၆ ကိုပြင်မပေးဘူးဆိုရင် NLD အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ပဲနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပကနေတိုက်မယ်ဆိုရင်ရော ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကိုရော…ဆရာတူမောင်ညိုအနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်စွာနဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ၂၀၀၈ ကိုဖျက်ပြီး..အသစ်ရေးဆွဲတာကိုပဲ လိုလားပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မလား..ကျနော်နားလည်တာကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တာကိုပဲ လုပ်တာအကောင်းဆုံးလမ်းနည်းလို့ပဲထင်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်တဲ့ခေတ်ကတော့ ကုန်နေပြီလို့ပဲထင်ပါတယ်။